Home amazinyo mhlophe | Indlela Engcono Kakhulu mhlophe Amazinyo Guide
Posts umake "ikhaya amazinyo mhlophe"
Indlela mhlophe amazinyo usebenzisa ekhaya mhlophe indlela
Baking soda iyatholakala ekhishini cishe zonke izindlu futhi usiza indlela mhlophe amazinyo akho. Abantu sebenzisa baking soda njengoba Tastemaker. Baking soda liyasetshenziswa ukuze ahlanze izinjongo. Isebenza ngempumelelo ukususa ngephunga okunoshukela imbala. Ungasebenzisa baking soda ukuze bahlanze amazinyo akho. Baking soda kuyinto athile emvelweni futhi lokhu sici sikusiza ukususa ibala ebusweni angaphandle amazinyo akho. Ngoba izinyo mhlophe, thatha spoon of soda, iconsi ambalwa amanzi bese isixubho esithambile-ezishaya eduze omanzi. Thatha soda asentendeni yesandla sakho bese wengeza amaconsi amanzi kuso ukwenza udaka of it. Manje agcobhoze isixubho singene unama ukuxubha amazinyo akho. Ungakwazi ukulandela le ndlela okuningi njengoba once njalo ngesonto.
Posted by mhlophe Amazinyo Guide - June 4, 2016 10:24 AM
Izigaba: Mhlophe Amazinyo Tips Tags: ikhaya amazinyo mhlophe, indlela mhlophe amazinyo akho, mhlophe amazinyo akho